Ukwethulwa kwe-Airbnb Plus
Bonke ubuntofontofo bendlu, nokunye
Izindlu eziklanywe ngendlela ecatshangelwe kahle. Ababungazi abasezingeni eliphezulu. Iqinisekiswe ngekhwalithi.
I-Airbnb Plus iyinhlanganisela kuphela yamakhaya ekhwalithi ephakeme kakhulu enababungazi abaziwa ngokushiwo abanye okuhamba phambili neso elinakayo.
Wonke amakhaya aqinisekiswa ngokusebenzisa ukuhlolwa kwendlu ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi nokwakheka. Vele ubheke uphawu lwe PLUS.
Zonke izindlu ze-I-Airbnb Plus ngezeqophelo elingavamile, ziklanywe kahle, futhi zinezinto ezivamile ezingamasevisi—kungakhathaliseki ukuthi usekamelweni lakho noma usebenzisa yonke indlu.
Indlu yonke ka-Allyson e-San Francisco
Hlola izindlu ze-Airbnb Plus e-San Francisco
Ikhaya ngalinye le-Airbnb Plus liqinisekisiwe ngekhwalithi nokuklama ukuqinisekisa ukuthi banezinto ezibalulekile zokukwenza uzizwe usekhaya—kungakhathaliseki ukuthi ukephi emhlabeni.
Ifulethi lika-Lilian Jin eliphelele eShanghai
Izindlu ze-Airbnb Plus zilapho ikhwalithi ephezulu ihlangana khona nomklamo ocatshangelwe kahle—kuze kufike kumniningwane wokugcina. Ngomklamo omuhle kanye nezici zomuntu siqu, izindlu zikwamukela njengobuhle bazo.
Yonke i-guesthouse ka-Matt ese-Los Angeles
Kunakho konke okudingekayo
Ungalindela isethi yamasevisi efanayo oyidingayo ukuze uphile njengasendlini yakho–njenge-wifi esheshayo nethelevishini elungele ukustrima namakhishi anakho konke okokupheka. Nazi ezinye izinto ezimbalwa ozozithola:
Amanzi ahlungiwe noma asebhodleleni
Izinto zokupheka njengamafutha, izinto zasekhishini nokokuphaka
Indlu ka-Rob iyonke e-Cape Town
I-Airbnb Plus Ababungazi benza umzamo owengeziwe ukuqinisekisa ukuthi indlu ihlanzekile impela, ayikho imfucufucu futhi isebenza ngokugcwele–kusukela ezindaweni ezingaphandle ezinakekelwa kahle ukuya emagumbini okugezela ahlelwe kahle anomfutho wamanzi onamandla. Ezinye zezinto ezimbalwa ozozithola:
Yonke imishini yendlu isebenza kahle
Okhiye abasebenzayo kuyo yonke iminyango yamakamelo ezindaweni ezihlanganyelwayo
Zonke izindawo zihlanzekile futhi zicocekile
Ababungazi abasezingeni eliphezulu
Ababungazi be-Airbnb Plus balinganiselwa phezulu (4.8+), banokucabangela futhi banakekela imininingwane ekwenza uzizwe usekhaya—njengamashidi antofontofo namakhishi anakho konke okudingekayo.
Nge-I-Airbnb Plus, ungangena noma nini ngaphandle kwenkinga. Wonke amakhaya anebhokisi lokhiye, ikhiphedi, noma umbungazi otholakalayo ukuze akubingelele.
Lapho ubhukha ikhaya le-I-Airbnb Plus ube usuqashelwa i- I-Airbnb Plus iqembu lethe elisekela amakhasimende–iqembu eliqeqeshwe kahle kakhulu elizinikele ekuhlinzekeni isevisi enhle nokunika izimpendulo ngokushesha.
Thola indlu ekahle kakhulu ye-I-Airbnb Plus ohambweni lwakho olulandelayo
Vele ubuke ibheji le-PLUS ngaphansi kwesithombe sendlu.
PLUSkuqinisekisiwe · I-Cape Town
PLUS kuqinisekisiwe I-Cape Town
PLUSkuqinisekisiwe · I-Barcelona
PLUS kuqinisekisiwe I-Barcelona
PLUSkuqinisekisiwe · I-Sydney
PLUS kuqinisekisiwe I-Sydney
PLUSkuqinisekisiwe · I-Los Angeles
PLUS kuqinisekisiwe I-Los Angeles
PLUSkuqinisekisiwe · I-Phoenix
PLUS kuqinisekisiwe I-Phoenix
Amakhaya e-Airbnb Plus emhlabeni jikelele
Kusuka kuma-bungalow asebhishi e-Los Angeles kuye ezindaweni ezithengisa itiye elehla esiphundu e-Kyoto, hlola amakhaya e-Airbnb Plus aqinisekiselwe ikhwalithi nokunethezeka.
Khombisa wonke amakhaya